Dhamma ume: gịnị ka ọ bụ, gịnị ka ọ na-eme na ihe ọrụ ọ nwere | Green Renewables
A na-akwalite ike anyanwụ site na ụlọ ọrụ na ọrụ ndị na-agbalị ime ka ike a bụrụ ihe na-emepe emepe. Otu n'ime ụlọ ọrụ na-agba ọsọ na ike anyanwụ bụ Ike Dhamma. Otu Dhamma Energy na-etolite, na-ewu ma na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ike anyanwụ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị banyere akụkọ ihe mere eme nke ike Dhamma, ọrụ kachasị mkpa na otú o si arụ ọrụ.
2 Ọrụ ike Dhamma
3 Ọdịdị na ego nke Dhamma ume
4 Nkesa hydrogen na Spain
5 Dhamma ike na ihe owuwu ya
Emere ọrụ Dhamma Energy na France na Spain na Ọktoba 2021 site na Eni gas e luce, enyemaka 100% nke Eni SpA. Dhamma Energy nwere ugbu a ụlọ ọrụ ike anyanwụ 120 MWp na France.
Dhamma Energy malitere ọrụ na France na Spain ihe karịrị afọ iri gara aga, ebe o mepụtara ọrụ mbụ nke anyanwụ. N'ikpeazụ, Dhamma Energy mụbara ọrụ ya na France, ebe o wuru ogige anyanwụ nke mbụ ya.
Na 2013, Dhamma Energy meghere enyemaka na Mexico, bụ nke mepụtara ụlọ ọrụ ike anyanwụ 470 MWp ma nwee ugbu a Pọtụfoliyo nke 2 GWp. Ka ọ dị ugbu a, otu ahụ na-arụ ọrụ fotovoltaic mbụ ya na Africa, ogige anyanwụ nke 2 MWp na Mauritius, nke meghere na 2015.
Ka ọ dị ugbu a, Dhamma Energy emechaala mmepe nke 650 MW nke ọkụ ọkụ fotovoltaic, nke dị na Mexico, France na Africa. Dhamma Energy ugbu a nwere pipeline 2 GWp na-arụ ọrụ na Mexico. Ndị ọrụ Dhamma Energy mejupụtara ndị na-ahụ maka ọrụ, ndị injinia na ndị ọkachamara nka na mpaghara fotovoltaic.
Ọrụ ike Dhamma
N'ime afọ ndị gafeworonụ, site na ahụmahụ ha nwetara, ha aghọwo onye ndu nweere onwe ya na mmepe nke ọkụ ọkụ fotovoltaic na mmepụta ike anyanwụ. Dị ka ndị mmepe, ndị na-ewu ụlọ, ndị na-arụ ọrụ na ndị na-etinye ego nke osisi fotovoltaic, ha na-ekpuchi usoro ndụ niile nke ọrụ ahụ: site na ịchọ ala ahụ na nlekọta na nlekọta nke ogige fotovoltaic.
Ndị otu ahụ na-ekpuchi usoro niile nke mmepe ọrụ PV anyanwụ, gụnyere ọmụmụ ihe gbasara ike, nyocha topographical, ọmụmụ gburugburu ebe obibi, nyocha saịtị, echiche nrụnye, nyocha teknụzụ, nyocha amụma na iwu, ikike ego, nguzobe nke ịzụrụ ike (PPA).
Dhamma Energy na-akwado ndị isi mba ụwa na-ebubata (modul fotovoltaic, inverters, sistemu nchekwa). Otu n'ime mpaghara ọrụ nke Dhamma Energy bụ njikwa ihe owuwu nke ọrụ fotovoltaic. Dhamma Energy na-esokwa ndị mmekọ ego ya ruo oge mmalite nke ọrụ a.
Na-arụ ọrụ na ndị ọkachamara na ndị nrụnye nwere ahụmahụ dị ukwuu n'ọhịa. Dhamma Energy arụpụtarala nke ọma ma wuo ụlọ elu na ọrụ anyanwụ nke ala na-arụ ọrụ ugbu a.
Ọdịdị na ego nke Dhamma ume
Otu n'ime akụkụ dị mkpa nke ọrụ a bụ nhazi na ego. N'ụlọ ọrụ ike anyanwụ a, ha nwere ahụmahụ, ihe ọmụma na nkà iji chekwaa ego na ịchekwa ego na-aga nke ọma nke ndị na-ahụ maka ọkụ na nnukwu ọkụ ọkụ n'okpuru iwu dị iche iche. Ahụmahụ ya kpuchiri ego ịkwụ ụgwọ nha nha yana ịkwụ ụgwọ ogologo oge ya na ụlọ akụ azụmaahịa na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Ha na-etinye aka na usoro ndụ niile nke ọrụ ahụ ma na-elekọta mmalite nke Ụlọ ọrụ ọkụ anyanwụ na ozugbo ha rutere ọkwa azụmahịa, ha na-etolite ma rụọ ọrụ ndị a. mmepụta ike anyanwụ bụ akụkụ nke azụmahịa.
Ugbu a, ha nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ike anyanwụ na-arụ ọrụ, gụnyere ọkara na nnukwu osisi ndị a na-agbanye n'ala, yana ụlọ elu, nke dị na France.
Nkesa hydrogen na Spain
Nkesa nke hydrogen green na ọrụ Europe ga-amalite na Spain na nsonye nke Enagás, Naturgy na Dhamma Energy. Ọrụ HyDeal Ambition bu n'obi imepụta nkesa nkesa Europe maka hydrogen green na ọnụ ahịa asọmpi na Spain, ebe ọgbọ ọkụ eletrik ga-amalite n'afọ na-abịa, na-atụ anya 10 megawatts kwa afọ.
Isi mmalite nke ike ume ọhụrụ a bụ mmepụta nke hydrogen green site na anyanwụ electrolysis, site na nke a pụrụ isi nweta ọnụ ahịa asọmpi site na mmemme ahụ, nke ga-eme nzọụkwụ mbụ ya na 2022 ma na-achọ iru 85 GW. nke ike anyanwụ na 67 GW. nke ike anyanwụ. Watts nke mmepụta ike electrolytic na 2030.
Nke a na-anọchi anya 3,6 nde tọn nke hydrogen green kwa afọ, ya na ọnwa abụọ nke oriri mmanụ na Spain, nke a ga-ekesa site na nchekwa ikuku gas na netwọk ụgbọ njem nke ụlọ ọrụ na-ekere òkè na atụmatụ a. A na-eme atụmatụ ọnụahịa maka onye ahịa na 1,5 EUR / kg, nke dị ka ọnụ ahịa mmanụ ọkụ ugbu a mana, na nloghachi, anaghị ebute mmetọ.
Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ Spanish atọ Enegás, Naturgy na Dhamma Energy, nnukwu ụlọ ọrụ ndị ọzọ sitere n'akụkụ ndị ọzọ nke Europe na-esonyekwa, dị ka Falck Renewables (Italy), Gazel Energie (France), GTTGaz (France), HDF Energie (France) , Hydrogen de France , McPhy Energy (France), OGE (Germany), Qair (France), Snam (Italy), Teréga (France), Vinci Construction (France)… ruo ụlọ ọrụ 30 na-esonye. Ndị a bụ ụlọ ọrụ sitere na mpaghara dị iche iche dị ka mmepe anyanwụ, imepụta akụrụngwa electrolysis, injinia, yana ego akụrụngwa na ndị ndụmọdụ.
Dhamma ike na ihe owuwu ya
N'afọ a 2021 n'ime ọnwa Mee, ike Dhamma rịọrọ ikike maka ntinye ọkụ eletrik nke osisi voltaji dị elu nke a na-akpọ "Cerrillares I photovoltaic solar plant". Mmepe nke oru ngo a, nke ga-adị n'etiti obodo Jumilla na Yecla, na-anọchite anya ntinye ego e mere atụmatụ nke nde euro 30, nke 28 nde euro kwekọrọ na ntinye ọkụ eletrik dị ala nke fotovoltaic anyanwụ na ala, na-esote ya n'akụkụ otu axis.
N'aka nke ọzọ, a ga-etinye nde euro 1 n'ahịrị nnyefe nke mpụga iji wepụ ike a na-emepụta (ogologo 12.617) na 742.000 euro na ọdụ ụgbọ mmiri. Ogige ntụrụndụ nke anyanwụ ga-ewe mkpokọta hectare 95 na, ozugbo arụ ọrụ. ọ ga-ewepụta ọkụ eletrik 97,5 GWh kwa afọ. Ihe mmepụta a bụ ihe oriri nke ihe dị ka ezinụlọ 30.000.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu gbasara ike Dhamma na ọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike Igwe fotovoltaic » ike dharma
Kedu ka esi ekpuchi ụlọ site na oyi na-atụ n'oge oyi?